မိန်းကလေးတွေက ဘယ်လိုအချက်တွေကို အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ နေတတ်သလဲ …. ??? - Myanmarload
မိန်းကလေးတွေက ဘယ်လိုအချက်တွေကို အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ နေတတ်သလဲ …. ???
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 12:30 August 18, 2017
မိန်းကလေးအနေနဲ့ တချို့အကျင့်တွေ ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ အမှုမဲ့ ၊ အမှတ်မဲ့ဆိုပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ရှိနေနိုင်ပါတယ် ။ မိန်းကလေးအနေနဲ့က တကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှု အားကောင်းဖို့ရော၊ လှပ သပ်ရပ်နေဖို့ရော အမြဲတမ်းနီးပါး လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိန်းကလေးအများစုက အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ဘယ်လိုပြုမူနေထိုင်တတ်လဲ … ဘာတွေ ဆင်ခြင်သင့်လဲ သိထားဖို့အတွက် ဗဟုသုတအနည်းငယ် မျှဝေပေးလို်က်ပါတယ် ။
၁။မိန်းမကိုယ်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးကြောခြင်း လုံးဝ မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး ။ အထူးသဖြင့် အမွှေးနံ့ပါတဲ့ ဆပ်ပြာတွေကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ရေ သီးသန့်ဖြင့် ဆေးရင် လုံလောက်ပါပြီ ။ ဆပ်ပြာမှာပါဝင်တဲ့ အချို့သော ဓါတ်တွေက ပြင်းတာကြောင့် မိန်းမကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက် မလိုလားအပ်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ မိန်းမကိုယ်သန့်စင်ရည်တွေကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်း မနက်တစ်ကြိမ် ၊ ညတစ်ကြိမ်သာ သုံးပေးပါ။ အလွန်အကျွံသုံးခြင်းကလည်း သင့်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်။
၂။ အမျိုးသမီးများ ဓမ္မတာလချိန်တွင် အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကို မလဲဘဲ အကြာကြီးမထားသင့်ပါဘူး ။ အနည်းဆုံး ၆နာရီခြားတစ်ခါ လဲပေးသင့်ပါတယ် ။ ၄ နာရီခြားတစ်ခါ လဲလျှင် ပိုပြီး သင့်တော်ပါတယ်။ ဓမ္မတာလာချိန်မှာ များစွာသော ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေနဲ့ ကူးစက်မှုတွေ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ် ။ ရာသီသွေးဆင်းမှု နည်းတတ်ရင်တောင် မနှမြောဘဲ လဲပေးသင့်ပါတယ် ။
၃။ ဓမ္မတာ လာနေစဉ်အတွင်း အချို့သော ရှေးရိုးစွဲများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ မိန်းကလေးများ ဓမ္မတာလာနေစဉ်အတွင်း ခေါင်းမလျှော်ရဘူးဆိုတာ ကြားဖူးနေတဲ့ စကားတစ်ခွန်းပါ။ ဓမ္မတာလာနေစဉ်အတွင်း မိန်းကလေးများအနေနဲ့ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုကို အရင်ကထက် ပိုပြီး ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
၄။အောက်ခံ သံကွင်း (သို့) ဝါယာပါတဲ့ ဘရာများကို နေ့စဉ် ဝတ်ဆင်ခြင်းကို မပြုလုပ်သင့်ပါဘူး။ ။ ဒီလိုဘရာတွေဟာ ဝတ်ဆင်လျှင် ပိုပြီးပုံကျ လှပပေမယ့် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အရတော့ မကောင်းမွန်ပါဘူး ။ မကြာခဏ ဝတ်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ အရေပြား ယားယံခြင်း ၊ နာကျင်ခြင်း ၊ သွေးလှည့်ပတ်မှုမကောင်းခြင်း ၊ ရင်သားမှာမှိုဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ နေ့စဉ်ဝတ်တတ်တဲ့အကျင့်ကို မဖြစ်မနေ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
၅။ ချိုင်းလိမ်းဆီသုံးခြင်းကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောင်ပါ။ ချိုင်းလိမ်းဆီသုံးစွဲမှုများခြင်းက ရင်သားကင်ဆာအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ချိုင်းလိမ်းဆီတွေဟာ အန္တရာယ်များတဲ့ ဓာတုအဆိပ်အတောက်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် အရေပြားပေါ် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့လိုက်လျှင် သွေးအတွင်းမှာ အဆိပ်အတောက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ ဒါေ့ကြာင့် လိမ်းမယ်ဆိုလျှင် အဝတ်အစားဝတ်ပြီးမှ အပြင်ဘက် လိမ်းပါ ။ ဘယ်လောက်ပဲ အန္တရာယ်မရှိပါဘူးဆိုဆို အဝတ်အစားဝတ်ပြီးမှသာ အပြင်ဘက် အသုံးပြုပေးပါ။ ချိုင်းမဲခြင်းကလည်း အချို့သော ချိုင်းလိမ်းဆီကြောင့်ဆိုတာ သင် သတိထားမိသင့်ပါတယ်။
၆။နွေရာသီမှာ ဘရာအမဲရောင် ဝတ်ဆင်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ အမဲရောင် ဘရာဇီယာကို ပူတဲ့ရာသီမှာ ဝတ်ဆင်ခြင်းက သင့်ကို ပိုပြီး ပူလောင်စေနို်င်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အဖြူရောင် (သို့) အခြားသော အရောင်ဖျော့ ၊ ပန်းပွင့် ဘရာတွေကို ဝတ်ဆင်ပေးတာက ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။
၇။ဘရာဇီယာကိုတစ်ခါဝတ်ပြီးတစ်ခါလျှော်ခြင်းသည် သင်၏ ဘရာဇီယာအား စောစောစီးစီး ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ် ။ ဘရာတစ်ထည်ကို ၃ခါဝတ်ပြီးမှ လျှော်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ။ မကြာခဏလျှော်နေရင် သင့်ရဲ့ ဘရာ ပုံပန်းသဏ္ဍန်ဟာ ပျက်ယွင်းပြီး သင့်ရဲ့ရင်သားအလှကိုလည်း ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
၈။ဘရာဝတ်ပြီးအိပ်စက်ခြင်း ဘရာဇီယာ ဝတ်ဆင်ပြီး အိပ်ထားခြင်းက အန္တရာယ်များပါတယ် ။ သင့်ရဲ့ရင်သားတစ်သျှူးတွေကို ထိခိုက်နိုင်ပြီး သွေးလည်ပတ်မှု အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ရင်သားနာကြင်မှုတွေ နှင့် တင်းကျပ်လွန်းသော ဘရာတွေက ရင်သားကင်ဆာအထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင် ့အိပ်နေစဉ်မှာ ဘရာချွတ်ပြီး အိပ်စက်ကြဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
၉။ အတွင်းခံများကို သေချာစွာလျှော်ဖွပ် မီးပူတိုက်ပြီးမှ ၀တ်ဆင်ပါ။ လူတွေ မမြင်ရဘူး ၊ မသိသာဘူးဆိုပြီးတော့ ဒီအချက်ကို မပေ့ါဆလိုက်ပါနဲ့။ ဒီလို ၀တ်ဆင်ခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိပြီး သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုလည်း အားကောင်းစေပါတယ်။
၉။နေပူထဲသို့ အကာအကွယ်မဲ့ထွက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဟာ အရေပြားကို ထိလျှင် အရေပြား လောင်ကျွမ်းပြီး အရေပြားကင်ဆာအထိ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် နေပူထဲထွက်တဲ့အခါမှာ sunscreen လိမ်းပါ ။ အကာအကွယ်ယူပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ နေရောင်မထိအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ဖုံးအုပ်ထားပါ။
ဒီလိုအချက်လေးတွေက မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ တကယ်ပဲ ဆင်ခြင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မသိဘဲ လုပ်မိနေတယ် ဆိုရင်လည်း နောက်မဖြစ်ရအောင် ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်သော ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Page generated in 0.2605 seconds with5database query and6memcached query.